नयाँ मोडेलमा आएको ३५० सिसिको बुलेटको दाम ह्वातै घट्यो, अब १ लाख ९ हजारमै आउने छ यो मोडेल ! « Etajakhabar
नयाँ मोडेलमा आएको ३५० सिसिको बुलेटको दाम ह्वातै घट्यो, अब १ लाख ९ हजारमै आउने छ यो मोडेल !
प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७६, शनिबार २१:४८
काठमाडौं । बेलायती मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्डले भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यको बाइक ‘बुलेट एक्स’ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । यो बाइकको किक स्टार्ट भर्सन १ लाख ४ हजार भारु र बुलेट इएस एक्स (इलेक्ट्रीक स्टार्ट) को मूल्य करिब १ लाख ९ हजार भारु हुने अनुमान गरिएको छ । रेगुलर मोडलको मूल्यभन्दा यो मूल्य ५० हजारले सस्तो हो ।बुलेट एक्स र बुलेट इएस एक्स दुई वटा भर्सनमा बिक्री वितरण हुने कम्पनीले जनाएको छ । बुलेट एक्स जेट ब्ल्याक पेन्ट कलर अप्शनसँगै, बुलेट सिल्भर, स्याप हायर ब्ल्यु र इएस एक्स रेगल रेड, रोयल ब्ल्यु र जेट ब्ल्याक कलर अप्सनमा आउने छ ।
कम्पनीले बुलेट एक्समा ३४६ सिसि सिंगल सिलिन्डर कार्बुरेटर इन्जिन लगाएको छ । यसले अधिकतम १९.८ हर्ष पावर र २८ एनएम पिक टर्क दिन्छ । यसको फ्रन्टमा डिस्क र रियरमा ड्रम ब्रेक लगाइएको छ भने, बाइकमा सिंगल च्यानल एबीएस, रियर ह्वील लिफ्ट अफ प्रोटेक्शनको विशेषता दिइएको छ ।सन् १९३२ बाट बुलेट बाइकको उत्पादन सुरु भएको हो । यो बाइक विशेषत दोस्रो विश्वयुद्ध ताका चर्चामा आएको हो । बेलायती सेनाले दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरेका यी बाइक नेपाली बजारमा पनि निकै चर्चामा रहेको छ ।
भारतीय बजारमा उत्पादन हुँदै आएको रोयल इन्फिल्डका बाइक नै नेपाली बजारमा बिक्री वितरण हुँदै आएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो क्वाटरमा भारतमा १९ प्रतिशतले बिक्री गुमाएको कम्पनीले अब भने सस्तो मूल्यका मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको हो । बजारमा आउने यो बाइकमा अधिकांश क्रोमहरु बुलेट कै जस्तो प्रयोग भएका छन ।केही फरक कलर अप्सनमा आउने यसको बाइकको नयाँ मूल्य अनुसार यसले पल्सर एनएस २००, टीभीएस अपाची आरटीआर २००, ४ भीसँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमान गरिएको छ । मेरो अटो
काठमाण्डौं – आपराधिक समूहले विभिन्न उपाए अपनाउँदै चोरी तथा अपराध गर्ने गरेका छन् । कसैले
२३ असार २०७७, मंगलवार १५:५८
२३ असार २०७७, मंगलवार १५:१५